Iphrofayela Yenkampani Namasiko Webhizinisi - I-Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.
I-Dongguan Jiankelong Hardware Co., Ltd.okuyinto ezikhethekile imikhiqizo insimbi itholakala Songbaitang Imboni Zone of Changping Town, Dongguan City, Isifundazwe Guangdong. Ezokuthutha zilula kakhulu futhi zisondele ethekwini laseShenzhen. Imboni yethu ihlanganisa amamitha ayi-25,000square, Futhi esinye isitshalo samamitha skwele angama-30,000 sakhiwa. Isitshalo sethu siqukethe i-machining workshop, imikhiqizo yensimbi engenasici ihlangana i-workshop, i-workshop yensimbi yensimbi, ikhabethe lensimbi elingenalutho lihlangana ndawonye, ​​kanye nesakhiwo sensimbi esingenasici sihlangana ndawonye.
Sikhethekile ku-balustrade yensimbi engagqwali & i-handrail, i-grating & drain, i-divider yensimbi esezingeni eliphakeme nensimbi yensimbi, abakaki bensimbi engagqwali besiteshi sesitimela. Kukhona ngokuphelele Series eziyisithupha nezinkulungwane imikhiqizo. Yonke imikhiqizo yamukela insimbi engagqwali ebangeni lama-304 & 316 ngezindlela ezahlukahlukene zokuqeda ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ethu. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu ithengiswe kahle kakhulu futhi yaziwa kakhulu emakethe yasekhaya nakwamanye amazwe, kufaka phakathi iHongKong, iSingapore, i-Australia, iYurophu, iNyakatho Melika neMiddle East.
I-JKL inamathela kwifilosofi yebhizinisi "yokufuna ukusinda ngekhwalithi, ukuthuthuka ngobuchule, nokwakha ukuvumelana nensizakalo". Siphumelele isihloko kanye nesitifiketi se- "China Famous Products", "China Famous Brands", "China's Preferred Products for Project Construction", kanye ne- "National Quality Reliable Products" .Sizuze idumela elihle, futhi ithonya lenyukile ngosuku emini. I-JKL manje yaziwa ngokuthi "ingcweti yezakhiwo zensimbi engagqwali yaseChina."
I-JKL isidlulile uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001-2015, yazuza isihloko sohlobo oludumile lwesifundazwe saseGuangdong.I-JKL iyilungu elilodwa le-Guangzhou Building Decoration Association.
Sigcizelela ekuthuthukiseni amasiko ethu ezinkampani: ukusebenzela amakhasimende ethu futhi sikhule ndawonye; ukuhlonipha abahlinzeki bethu futhi sifinyelele isimo sokuwina; ukunakekela abasebenzi bethu kahle futhi sihlanganyele ndawonye. Ngokwakha isiko lenkampani, isilinganiso sethu sokukhiqiza nokuthengisa sikhula usuku nosuku. Sihehe ochwepheshe abaningi ukuba bajoyine inkampani yethu, futhi izinga lethu lokuphatha linyathela ngase-internationalizaton.
Inhloso yethu yokuthuthukiswa kwesikhathi eside ukuthi ibe ibhizinisi elidume kakhulu lezinto zokwenziwa zePearl River Delta futhi sibeke isibonelo esihle kubalingani bethu! Ngomgomo webhizinisi wokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo enhle kakhulu nensizakalo, ukwakha okwengeziwe ngokwengeziwe okudala.
Siyakwamukela ku-JKL futhi sizimisele ukubambisana nawe. Masakhe ikusasa eliqhakazile ndawonye！
Insimbi Engagqwali Handrail, Izandla zokubopha, Kuqondile Handrail Abakaki, Wokugibela Handrail Bracket, Engagqwali ikheshi Handrail, I-Handrail Base Plate,